Birgunj Daily - कांग्रेसका उम्मेदवार मो. अफताब आलमको उल्टो गिन्ती शुरु ः मुस्ताक आलम
11/26/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित 697 पटक पढिएको
रौतहट १० मंसिर ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर २ मा वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका मो. मुस्ताक आलमले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मो. अफताब आलम तिर ईसारा गर्दै मामाको उल्टो गिन्ती शुरु भएको बताएका छन् ।
वाम गठबन्धनले आईतवार रौतहट क्षेत्र नम्बर २ अन्र्तगत भगवापुरमा आयोजना गरेको आमसभा लाई सम्बोधन गर्दे सो कुरा उम्मेदवार आलमले बताएका हुन् ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा फराकिलो मतअन्तरले पराजित गरि उहाँको धमण्ड तोडिसकेको भन्दै मुस्ताक आलमले आसिन्न निर्वाचनमा सो भन्दा बढि मतअन्तरले पराजित गरि उहाँबाट जनतालाई पाएको सास्तीको बदला लिने ठोकुवा गरेका छन् ।
आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्न कांग्रेस उम्मेदवारले हजारौ हत्कण्डा अपनाउने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको भन्दै वाम उम्मेदवार आलमले आफु त्यसको लागी पूर्णरुपमा सजग रहेको बताएका छन् ।
आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आलमले एउटा चर्चित गाउखाने उखान को प्रयोग गर्दै घरको भेदि लंका जलाउछ भन्ने उखान आफुले सिद्ध गरि देखाउनेमा विस्वस्त हुन आम मतदाता संग आग्रह समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मामाको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकोले बुथ कब्जा गर्न समेतको रणनितिमा विपक्षी लागि सकेकोले सम्पूर्ण जनतालाई जनताको मतको सुरक्षाका लागी तैयार रहन आलमले आग्रह समेत गरेका थिए ।
आमसभालाई सम्बोधन गर्ने अन्य वक्ताहरु मध्ये पूर्व सभाषद अबदुल कलाम आजादले सम्बोधनको क्रममा मधेशी गठबन्धनका उम्मेदवार किरण साहलाई भोटकटवाको संज्ञा दिएका छन् ।